Ụgbọ elu si Kazakhstan na Maldives na Air Astana ugbu a
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu si Kazakhstan na Maldives na Air Astana ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ Kazakhstan na -agbasa • Akụkọ okomoko • Akụkọ Maldives na -agbasa • News • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ndị njem niile, gụnyere ndị a gbara ọgwụ mgbochi nke ọma, chọrọ asambodo ule PCR na -adịghị mma n'asụsụ Bekee iji banye na Republic of Maldives. Tụkwasị na nke a, ndị njem kwesịrị imezu Nkwupụta Ahụike Onye Njem n'ime awa 24 tupu ọpụpụ.
Air Astana na -ekwupụta ụgbọ elu na -aga kpọmkwem site na Almaty, Kazakhstan ruo Male na Maldives.
Kazakhstan na ụgbọ elu Maldives ga -amaliteghachi n'October 9, 2021.
A ga -eji ụgbọ elu Airbus A321LR na Boeing 767 rụọ ọrụ ụgbọ elu Astana Maldives.
Air Astana ga -amaliteghachi ụgbọ elu na -aga kpọmkwem site na Almaty ruo Male na Maldives na Ọktọba 9, 2021.
Ụgbọ elu Airbus A321LR na Boeing 767 ga-arụ ọrụ n'okporo ụzọ Almaty-Male ugboro anọ n'izu na Tuzdee, Tọzdee, Satọde na Sọnde.
Ikuku Astana ụgbọ elu na -arụbu ọrụ na mbụ Maldives malite na Disemba 5, 2020 ruo Mee 24, 2021, tupu nkwusioru n'ihi mgbochi gọọmentị.
Ndị njem niile, gụnyere ndị a gbara ọgwụ mgbochi nke ọma, chọrọ asambodo ule PCR na -adịghị mma n'asụsụ Bekee iji banye na Republic of Maldives.
Tụkwasị na nke a, ndị njem kwesịrị imezu Nkwupụta Ahụike Onye Njem n'ime awa 24 tupu ọpụpụ.
A ga -enye visa n'efu mgbe ị rutere n'ọdụ ụgbọ elu nwoke.
Mgbe ha laghachiri na Kazakhstan, ndị njem niile ga -enwerịrị asambodo PCR na -adịghị mma, ewezuga ndị a gbara ọgwụ mgbochi ọ bụla.
Air Astana bụ ụgbọelu na -ebu ọkọlọtọ nke Kazakhstan, dabere na Almaty.
Air Astana na -arụ ọrụ nhazi, ọrụ ụlọ na nke mba ụwa n'okporo ụzọ 64 site na isi ọdụ ụgbọ elu ya, Almaty International Airport, na site na etiti ya, Nursultan Nazarbayev International Airport.
Ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Almaty, nke bụbu ọdụ ụgbọ elu Alma-Ata, bụ nnukwu ọdụ ụgbọ elu mba ụwa 15 kilomita n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Almaty, obodo kachasị ukwuu na isi obodo azụmahịa nke Kazakhstan.
Ọdụ ụgbọ elu mba ụwa Almaty bụ ọdụ ụgbọ elu kacha arụ ọrụ na Kazakhstan, na -akpata ọkara nke ndị njem obodo na 68% nke okporo ụzọ ibu.
COVID Delta dị iche iche gbasaa na Hawaii
Gastronomy na-adịgide adịgide na agwaetiti Seychelles
Onye isi ala Duterte: Ọ bụrụ na ịchọghị inweta ...